Furayaasha helitaanka jiko wax ku ool ah | Bezzia
Furayaasha helitaanka jiko wax ku ool ah
Maria vazquez | | Karinta
Waxaa jira talaabooyin fudud oo naga caawin kara inaan helno a jikada waxtarka badan Tallaabooyin fudud oo, marka lagu daro ka caawinta dhimista biilasheena, yareynaya raadkeena deegaanka. Taasna dadaalkeena si aan kaaga caawino inaad abuurto guryo ixtiraam badan deegaanka, waxaan dooneynay inaan kula wadaagno.
El keydinta korontada iyo adeegsiga caqliga leh ee biyuhu waa laba ka mid ah furayaasha lagu gaadhayo kushiin wax ku ool ah. U turjumida labadan qodob talaabooyin la taaban karo, waxaan ogaanay in helitaanka qalab hufan iyo ogaanshaha sida wanaagsan looga faa ideysto, xaddidida qulqulka qulqulka iyo taxadarka laydhka iyo dahaarka labadaba waa lama huraan.
1 Qalabka guriga oo hufan: qiimeynta tamarta
2 Isticmaalka qalabka
3 Fallaadhaha awoodda smart
4 Xaddidayaasha qulqulka
5 Windows iyo nalalka
Qalabka guriga oo hufan: qiimeynta tamarta
Qalabka guryaha ee wax ku oolka ahi waa kuwa, inta u dhexeysa, isticmaala tamar yar si ay u qabtaan isla hawshaas. Si loo ogaado wax ku oolnimada qalab kasta, waxaan u adeegsan doonnaa sumadda tamarta; Qiyaasta qiimeynta qasabka ah ee Yurub taxane dheer oo qalabka guryaha ah.
Sumadda tamarta hadda iyo tan cusub (laga bilaabo Maarso 1, 2021)
Sumadda tamarta ayaa noo oggolaanaysa inaan si dhakhso leh oo fudud u ogaanno awoodda aaladda la sheegay inay ku fuliso shaqadeeda a isticmaalka tamarta oo hooseeya. Waa ku filan tahay in lagu ogaado cabbirka kala soocidda xarfaha iyo midabada ay soo bandhigayso. Midabka cagaaran ayaa tilmaamaya qalabka ugu waxtarka badan, halka midabka casna uu tilmaamayo kuwa ka waxtarka yar. Ka mid ah qalabka ugu waxtarka badan waxaan sidoo kale kala saari karnaa 3 fasalo oo dheeri ah: A +, A ++ iyo A +++. Kuwa dambe ayaa ah kuwa ay tahay in aan helno haddii aan dooneyno in keydku noqdo mid muhiim ah; cun ilaa 70% ka yar celcelis ahaan.
Waa inaad ogaataa, si kastaba ha noqotee, in cabirkani noqon doono la beddelay illaa 1dii Maarso ee 2021 si tartiib tartiib ah miisaanka A ilaa G. Waxay markaa ku talo jiraan inay fududeeyaan calaamadaha tamarta si ay u fududaato in la fahmo. Sidaas darteed haddii aad ka iibsaneyso mashiin cusub dharka, qallajiye, qaboojiye, laambad, shaashad ama telefishan laga soo bilaabo taariikhahaas, waxaad ka heli kartaa sumaddan cusub.
Isticmaalka wanaagsan ee qalabka korontada, gaar ahaan kuwa sida qaboojiyaha oo isticmaalkiisu koronto aad u sarreeyo, ayaa lagama maarmaan u ah in la helo jiko wax ku ool ah. Wuxuu ku bixiyaa a 31% wadarta isticmaalka, Ma ogeyd macluumaadkan? Ha ku dhejin meel u dhow isha kuleylka (hiitarka, foornada, shooladda korontada) oo hubi in hawo kugu filan ay ku wareegeyso qalabka waa furaha hawlgalka saxda ah.
Marka laga hadlayo kuleylkeeda, laguma talin karo in xulista loo dhigo qiime gudaha ka hooseeya 5º C qaboojiyaha, iyo -18º C qaboojiyaha. Sidoo kale, xir albaabka qaboojiyaha iyo meel dhig oo si sax ah u dalbo cuntada gudaha qaboojiyaha ayaa kaa caawin doona inaad isticmaasho koronto yari iyo inaad keydiso tamarta.
Tilmaamaha abaabulka qaboojiyaha
Waxaad maqashay kun jeer: ha luqluqin suxuunta ka hor intaadan ku ridin weelka weelka oo aad si buuxda u buuxiso ayaa kaa caawin doona inaad badbaadiso biyaha iyo tamarta. Intaas waxaa sii dheer, adeegsiga saabuun nadiif ah iyo dayactir sax ah kaas oo dareemid nadiifin ah lagu sameeyo hal mar labadii asbuucba waxay gacan ka gaysan doontaa shaqadiisa saxda ah. Iyo mashiinka dharka lagu dhaqo? Dharka oo lagu maydho 40ºC halkii 60 insteadC lagu badbaadin lahaa ilaa 55% tamar.
Fallaadhaha awoodda smart
Qalabka ku jira habka sugitaanku wuxuu cunaa ilaa 10% biilka korantada ee dhammaan qoysaska reer Yurub. Sidee looga fogaadaa lacag-bixinta dheeraadka ah ee qalabkan? Maalgelinta qalab taas xir korontada qalabka heeganka ama habka hurdada.
Kawaran haddii aan dooneyno inaan helno dheriga qaxwaha uumi baxaya markaan soo toosno? Marka waan sii wadi karnaa oo waxaan ku sharxi karnaa fiilooyinka casriga ah iyo fiilooyinka korontada, aalado casri ah oo koronto lagu keydiyo Shaqadeeda ugu weyni waxay wali tahay kantaroolka aaladda iyo deminta aaladahaas, laakiin waxay hore u sii socdaan hal talaabo noo ogolaanaya barnaamijkiisa ama xakameyntiisa ka socota mobilka. Inbadan ayaan ka hadalnay asbuucyo kahor, ma xasuusataa?
4 qalabka lagu keydiyo korontada guriga
Isbaanish kasta wuxuu cunaa, celcelis ahaan, qiyaastii 166 litir oo biyo ah maalintii inta udhaxeysa isticmaalka guriga iyo degmada. Biyuhu waa wax yar oo wanaagsan oo isticmaalkooda waara wuxuu ku xiran yahay qof kasta oo inaga mid ah. Si kasta oo ay u muuqato wax aan qiimo lahayn, in biyaha lagu keydiyo guriga waa muhiim waana ku filan tahay in la ogaado sida loo demiyo qasabadaha iyo meeleeyaha yareeya kuwan loogu talagalay Ma ogtahay in kuwan aad ku keydin karto inta u dhexeysa 18% iyo 47% oo biyo ah. Waxaad ka heli doontaa jiko wax ku ool ah hab dhaqaale.
Windows iyo nalalka
Ka faa'iideysiga iftiinka dabiiciga ah adoo dooranaya midabyo iftiin ah oo gacan ka geysta iftiinka weyn ayaa fure u ah badbaadinta korantada. Marka tani aysan ku filneyn, waxa ugu fiican ayaa lagu sharxi doonaa nalalka iftiinka isticmaalka yar. Ma ogtahay in la beddelayo laambadaha dhaadheer ee jikada Iftiinka LED-ka ka dhigan tahay keydinta 50%?
Marka lagu daro u oggolaanshaha iftiinka dabiiciga ah, daaqadaha sidoo kale waxay u oggolaan karaan kuleyl iyo qabow. Albaabada iyo daaqadaha ayaa matalaya qodobada ugu muhiimsan ee luminta heerkulka iyo hubinta inay xaalad wanaagsan ku sugan yihiin waa muhiim si loo xakameeyo kharashka kuleylka iyo qaboojiyaha. Ma rabtaa inaad ogaato sida loo sameeyo? Daacadnimo, furayaasheena qaar daaqadaha tamarta ku shaqeeya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » Karinta » Furayaasha helitaanka jiko wax ku ool ah
Ma taqaanaa waxtarka iyo sifooyinka kombu seaweed?
Dharka jaakadaha si aad u qurxiso hoolkaaga